Xog: Gaafow iyo Gabre oo hadalo kulkul is weydaarsaday iyo Gaafow oo xabsiga dhigay.... - iftineducation.com ≡Navigasi Menu
Home → layaab
→ Xog: Gaafow iyo Gabre oo hadalo kulkul is weydaarsaday iyo Gaafow oo xabsiga dhigay....
Xog: Gaafow iyo Gabre oo hadalo kulkul is weydaarsaday iyo Gaafow oo xabsiga dhigay....
iftineducation.com - Warar aad loogu kalsoon yahay oo aan ka helnay ilo wareedyo ka tirsan taliska ciidanka Nabad Sugida Qaranka ee NISA ayaa Caasimada Online u sheegay in maanta uu xafiiskiisa ku soo booqday Gen. Gaafow wakiilka Itoobiya Gen Gabre.
Gabre oo aad uga walaacsan howlgalada aay ciidanka NISA ka wadaan magaalada Muqdisho, iyo fashilinta isdaba jooga ah oo aay ku hayaan kooxaha nabad diidka ah ee Shabaab ayaa waxaa uu damcay in uu kala hadlo Gen. Gaafow halka aay marayaan howlgaladaas iyo natiijooyinka laga gaaray.
Gen. Gaafow ayaa u sheegay Gabre in aanu wax shaqo ah ku lahayn in uu ogaada howlaha sirdoonka ah ee ka socdo Soomaaliya, isla markaana uga digay in uu ka waantoobo faragelinta joogtada ah ee uu ku hayo danaha dalka Soomaaliya. Gen Gaafow oo maanta aay aad uga muuqatay caro badan ayaa waxaa uu amar ku bixiyay in xabsiga loo taxaabo ciidankii ka soo geliyay Gabre illinka hore ee laga galo xarunta NISA. Waxaa sidoo kale xabsiga loo taxaabay dhallinyaro Soomaali ah oo la socday Gabre kuwaasoo ka tirsan xarunta Madaxtooyada ee VILLA Soomaaliya.
Seddexdii maalmood ee la soo dhaafay ayaa la sheegayaa in ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa gobolka Hiiraan aay ka baxeen ilaa sagaal (9) barood oo aay degenaayeen, waxaana aay si toos ah ugu wareejiyeen goobahaas Shabaab iyagoo u diiday in ciidanka Jabuuti aay la wareegaan. Waxaa xarunta Xalane ka socda shirar aay leeyihiin wadamada Ugandha, Kenya, Jabuuti iyo Burundi oo looga arrinsanayo ciidamada Itoobiya ee ka tirsan AMISOM.
Waxaa lagu wadaa in aay cabasho wadareed u gudbiyaan Qaramada Midoobay, iyo dhammaan beesha caalamka sidii gebi ahaanba looga saari lahaa ciidamada Itoobiya dalka Soomaaliya iyo AMISOM.
Itoobiya hadda aay ka jirto amni darro loogana cabsi qabo in uu ka dhaco dagaalo sokeeye ayaana marnaba raalli ka noqoneyn in Soomaaliya aay degto.
Villa Soomaaliya ayaa ka aamusan xaaladda cakiran ee jirta Itoobiya, iyo falalka amni darro oo aay hadda ka wadaan gudaha Soomaaliya.
galmadi guska iigu aadi iska dhaaf ninyahow ee xaaskaaga sidaan ugu waaxeey
Halkee Ayay Ragga Ugu Jecelyihiin Qeybaha Dumarka (Xog Muhiiim Ah)
VIDEO:QARSOON: OO KASOO DUUBAY XAASKIISA DAMIIR XUMAA